Madaxweyne Farmaajo oo mar kale shir isugu yeeray Madaxda Maamul Goboleedyada – XOGMAAL.COM
Madaxweyne Farmaajo oo mar kale shir isugu yeeray Madaxda Maamul Goboleedyada
Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo Madaxweynaha Soomaaliya ayaa isaga oo garwaaqsan baahida loo qabo ilaalinta midnimada, wadajirka iyo qarannimada Soomaaliyeed, isla markaasna tixraacaya shirkii ay bishan Oktoober yeesheen madaxada Dowlad Goboleedyada, wuxuu mar kale ku celinayaa baaqiisii ku aaddanaa in shir wadatashi ah ay kasoo qeyb galaan Madxda Dowlad Goboleedyada kaas oo looga wada hadlayo xal u helista tabashooyinka ay qabaan.
“Uma ogolaan karno kala aragti duwanaansho siyaasadeed darteed in gaabis ku yimaado guulihii sida adag aanu ku yagleelnay ee la xiriiray dib u dhiska dalka iyo hay’adaha dowliga ah. Wadahadal iyo midnimio dhab ah oo kelliya ayaa inoo sahli kara inaanu hore uga sii dhaqaaqno halka aan hadda taagannahay. Talo iyo cudud mid ah ayaanu uga adkaan karnaa kooxda arxan laaweyaasha ah ee Alshabaab si aanu u gaarsiino dadkeenna nabad, barwaaqo iyo horumar.”
Madaxda Maamul Goboleedyada lama oga sida ay uga jawaab celin doonaan baaqa Madaxweynaha ee ku aadan shirkaan uu isugu yeeray, Iyadoo laba goor oo hore ay dhagaha ka fureysteen baaqyo hore uu Farmaajo u diray.
Sawirro:- Kheyre oo furay Shirka kooxda xiriirka Soomaaliya ee Ururka Iskaashiga Islaamka
Ciidamada ammaanka ayaa xabsiga dhigay xildhibaan ka tarsal Baarlamaanka